I-Tulku: "I-Reborn" Master yeBuddhism yaseTibetan
Igama elithi tulku ligama lesiTibetan elisentsingiselo "umzimba wenguqu," okanye " nirmanakaya ." Kwi-Tibetan Buddhism, i- tulku ngumntu oye wachongwa njengento yokuphuma kwendoda efile. Imigangatho ingaba ngamaxesha emininzi ubude, kwaye inkqubo inika umgaqo kuthetha ukuba imfundiso yezikolo ezahlukahlukeneyo zaseBibetan Buddhism . Inkqubo yeTulku ayikho kwamanye amasebe eBuddhism.
Kukho inkqubo ecacileyo yokuchonga nokufundisa inkosi entsha.
Emva kokufa kwe-tulku endala, iqela lelami elihlonitshiweyo lihlanganisene ukuze lifumane ukutsha kwakhona. Basenokukhangela iimpawu zokuba i-tulku efile ishiye imilayezo iboniswe apho iya kuphinda izalwe khona. Iimpawu ezahlukeneyo ezinje, ezifana namaphupha, nazo ziyakucingelwa. I-Tulkus isoloko ichongwa xa ibantwana abancinane. Uninzi, kodwa kungekhona, i-tulkus yindoda. Kukho iinombolo zeetulku kwi-Tibetan Buddhism, kuquka iDalai Lama kunye neKarmapa.
I-Dalai Lama yangoku i-14 kwisizukulwana esaqala ngonyaka we-1391. Wazalelwa ngo-1937 njengoLhamo Döndrub, i-14 yeDalai Lama yachongwa njengeTulku ye-13 Dalai Lama xa wayeneminyaka emine kuphela ubudala. Kuthiwa kuye kwachithwa ngempumelelo izinto ze-13 Dalai Lama, zibiza ngokuba zodwa.
Emva kokuqatshelwa, i-tulku ihlula kwintsapho yayo kwaye iphakanyiswe kwiitendelezo ngabafundisi nakubakhonzi.
Ubomi obunomdla njengoko efunda iinkqubo eziyinkimbinkimbi kwaye ngokugqithiseleyo uphatha imisebenzi ye-tulku yangaphambili, kodwa i-atmospheric enye yento yokuzinikela kunye nothando kumphathi omncinci.
I-Tulkus idla ngokubizwa ngokuthi "i-master", kodwa kubalulekile ukuqonda ukuba inkosi ayiyilo "umphefumlo" ozalwe kabusha okanye oguquguqukayo, kuba ngokufundiswa kweBuddhist umphefumlo ongenakuthiwa ukho.
Esikhundleni somphefumlo obuye wazalwa, i-tulku icingelwa ukuba ibonakaliso lwenkosi ekhanyisiweyo kwifom ye-nirmanakaya (jonga i- trikaya ).
Abantu badla ngokudibanisa i-term tulku ne- lama . I- lama yinkosi yokomoya onokuthi, okanye mhlawumbi ingabi yi-tulku.
Goindwal Baoli, i-Well of Goindwal
Ubomi, Izifundo kunye nobugcisa beZen Master Hakuin
Imibuzo yeeNkwenkwekazi zeSifundo noHlangano
Iikhowudi zeMpawu zoKhuseleko lweMichiza (i-NFPA 704)
U-Annunciation: Ingelosi eyinkulu uGabriyeli ivakashela iNtombikazi kaMariya
Aminyaka amahlanu kaHesode
Ukuhlambalaza iindaba zeGhost ezivela kwiintolongo zase-US
Isicwangciso soSifundo: Uphawu lwakho lweZowdiac
Ngaba amaSulumane avumelekile ukuba afumane amaTattoos?
Indlela yokuhamba kunye nokuvuselela ukuLawula ngexesha lokusebenza (kwi-Delphi Izicelo)
I-Giant Florida Rattlesnake